Zvinodhura zvakadii kutumira mudhudhudhu? - Yangu Mota Kunze
Zvinodhura zvakadii kutumira mudhudhudhu?
Mutengo wacho unosiyana zvakanyanya zvichienderana nepasi rese rauri kutumira imwe kubva uye kuti uri kuendesa sei.
Mudhudhudhu wakakosheswa unodhura kupfuura kungoumburusa mumudziyo weRoRo. Asi kazhinji kutaura, mutengo wacho unenge wakachipa kupfuura mota uye unogona kutanga kwanaita mazana matatu emadhora uye woenda nzira yese kusvika kutenderera paUS $ 300 zvichienderana nekuti urikutumira kubva kupi.
Isu tinokurudzira kusangana nekutaura kwakakodzera chitaurwa pakutumirwa kwemudhudhudhu wako kuenda kuUnited Kingdom uchishandisa fomu yedu yekukumbira quote.